सचिवालय बैठक नै विवादित हुनेगरी अर्थमन्त्री खतिवडाको पक्षमा प्रधानमन्त्रीको आशक्ति किन ? यस्तो छ आन्तरिक समिकरण !
काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका कारण सचिवालय बैठक नै विवादको थलो बन्ने सङ्केत देखा परेको छ ।
नेकपामा अर्थमन्त्री खतिवडाको पक्षमा दह्रो उभिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भोलिको सचिवालय बैठक केही सकसपूर्ण हुने अवस्था देखिएको हो । कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर र त्यसलाई उकास्न खतिवडाले खेल्ने भूमिकाको फेहरिस्त तयार पारेर बसेका प्रधानमन्त्रीलाई सचिवालय ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा 'बादल'बाहेकको साथ नमिल्ने देखिएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग आन्तरिक सहमति जुटाएका रक्षा र गृहमन्त्री द्वय पोखरेल थापाले आफ्नो पद सुरक्षित रहने गरेर मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्नुपर्ने धारणा राखिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट ग्रिन सिग्नल पाएका उनीहहरु अर्थमन्त्री प्रकरणमा ओलीलाई नै साथ दिने स्रोतको दाबी छ ।
अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गाैतम, महासचिव विष्णु पाैडेल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ अर्थमन्त्रीलाई दोहोर्‍याउने पक्षमा छैनन् । उनीहरुको समग्र बुझाई उनी राजनीतिक पृष्ठभूमिका नभएका कारण जनजीविकासँग जोडिन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । अझ यी सचिवालय सदस्यहरू मध्ये गाैतमले खुलेरै अर्थमन्त्री बन्ने चाहना व्यक्त गरिसकेका छन् भने महासचिव पाैडेल समेत उक्त मन्त्रालय पाए लिने पक्षमा छन्।
स्रोतका अनुसार गाैतमले धेरै जस्तो सचिवालय सदस्य र पार्टी अध्यक्ष द्वयलाई आफू राष्ट्रियसभामा जाने र उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री पाए जाने भनेर भनिसकेका छन् । यता महासचिव पाैडेल समेत अर्थ मन्त्रालय ताकेर रहेका छन् । उनी आफू नभए पनि कुनै नेतालाई दिनुपर्ने पक्षमा छन् । खतिवडालाई दोहोर्‍याउने पक्षमा उनी छैनन् ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री ओली भने खतिवडाले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर आर्थिक सहायता जुटाउन सक्ने र अर्थतन्त्रलाई गहिरो गरेर बुझेका व्यक्ति भएकाले दोहोर‍याउनेउ पक्षमा छन् । उनले प्रचण्डसँगको भेटवार्तामा समेत यस्तो प्रस्ताव राखिसकेका छन् । यसरी अर्थमन्त्रीबारे नेकपामा तानाखिचि चलिरहँदा अब टुङ्गोमा लगाउन सकस पर्ने नेताहरुले जनाउने गरेका छन् ।
आम रुपमा समेत खतिवडाप्रति नेकपाका कार्यकर्ताहरू सन्तुष्ट छैनन् । खतिवडाको कार्यशैली समेत राजनीतिक नभएको भन्दै असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताहरूले समेत उनलाई दोहोर्‍याउन नहुने दबाब सिर्जना गर्न थालेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले गाैतमलाई रोक्न उपचुनाव गराएर जान सकिने जनाइसकेका छन् । उनले डोल्पाबाट गाैतमलाई उपचुनाव गराएर सांसद बनाउने भने पनि गाैतमले कोरोनाका कारण अहिले चुनाव गर्न सहज नहुने र हिँउ पर्ने सिजन सुरु हुन लागिसकेकाले समेत त्यो बाटो सहज नहुने आफू निकटलाई जनाउने गरेका छन् । स्थानीय निकायको चुनाव त्यसपछि आम चुनावको तयारी गर्दा आफू सांसद हुने सम्भावना नहुने भन्दै राष्ट्रियसभामा गएर अर्थमन्त्री बन्ने चाहना व्यक्त गरेको जनाइन्छ ।
दुई अध्यक्षले भदौ ९ मा छलफल गरेर भदौ १३ का लागि बैठक बोलाए पनि पछि स्थगित गरेर १८ (बिहीबार) सम्म सारेका थिए । उक्त बैठकको एजेण्डा नेकपाको विवाद समाधान गर्न बनेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नुपर्ने भए पनि आ-आफ्ना कुराहरू तर्फ जाने हुँदा मूल एजेण्डामै प्रवेश गर्न सक्ने स्थिति बनेको र विवादको थलो बन्ने आकलन नेकपाका नेताहरूले गर्न थालेका छन् ।
खतिवडालाई संविधानको धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम २०७४ सालको फागुन २१ गते राष्ट्रिय सभाको सदस्य मनोनीत गरिएको थियो । मनोनीत भएपछि उनी अर्थमन्त्री भएका थिए । गोला प्रथाबाट उनको कार्यकाल २०७६ साल फागुन २० गते सकिएको थियो । कार्यकाल सकिएपछि उनलाई पुनः मन्त्री पदमा मात्र नियुक्ति दिइएको हो । संसद् सदस्य नरहेका अर्थमन्त्री खतिवडाको म्याद भदौ २१ गते सकिँदै छ । उनलाई नै मन्त्रीमा निरन्तरता दिने हो भने सरकारले २० गतेअघि नै राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।